Nyocha Beelink GT-King nke flagship ọhụụ (Amlogic S922X) | TeraNews.net
na-ede akwụkwọ nka E bipụtara 01.06.2019
Gụọ ntụle a na njedebe nke edemede.
N'ikpeazụ, ndị editọ anyị natara Beelink GT-King. Anyị ga-anwa ịkọrọ gị n'ụzọ zuru ezu banyere igbe ọhụrụ set-top, ike ya, uru na ọghọm ya, ma gbalịa ịchọpụta ma ọ bara uru ịzụta.
Ka anyi bido site na nkọwa oru.
Nke mbụ 1 si 3 Ọzọ
CPU CPU S922X Quad core ARM Cortex-A73 na sọrọ isi ARM Cortex-A53
Ntụziaka setịpụrụ 32bit
1.8GHz ugboro ugboro
Udiri eserese 800MHz
Na-egosiputa x HDMI akwadoro, 1 x CVBS
Egwu Wuru na DAC x1 L / R, x1 MIC
Port x1 USB2.0 Port, x2 USB3.0 Port
x1 HDMI 2.1 -dị-A
x1 TF kaadi oche
onye natara ihe onyinye
x1 Nweta nkwalite
Os gam akporo 9.1
Питание Ntinye ihe ngbakwunye: 100-240V ~ 50 / 60Hz, Mmepụta: 12V 1.5A, 18W
Ibu ibu 189 gram
Mpempe akwụkwọ ndozi ngwaike na-akwado ya
Na-akwado ihe ọkpụkpọ vidiyo ọtụtụ ruo 4Kx2K @ 60fps + 1x1080P @ 60fps
Na-akwado ọtụtụ oge idekọ vidiyo "echekwara" na ịmegharị na ntanye na n'otu oge
H.265 / HEVC Main / Main10 profaịlụ @ larịị 5.1 Isi-elu; ruru 4Kx2K @ 60fps
Profaịlụ VP9-2 ruo 4Kx2K @ 60fps
H.265 HEVC MP-10 @ L5.1 rue 4Kx2K @ 60fps
Profaịlụ AVS2-P2 ruo 4Kx2K @ 60fps
H.264 AVC HP @ L5.1 ruo 4Kx2K @ 30fps
H.264 MVC ruo 1080P @ 60fps
MPEG-4 ASP @ L5 ruo 1080P @ 60fps (ISO-14496)
WMV / VC-1 SP / MP / AP ruo 1080P @ 60fps
Profaili AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Profaịlụ ruo 1080P @ 60fps
MPEG-2 MP / HL ruo 1080P @ 60fps (ISO-13818)
MPEG-1 MP / HL ruo 1080P @ 60fps (ISO-11172)
RealVideo 8 / 9 / 10 ruo 1080P @ 60fps
Nkwakọ ngwaahịa na nkwakọ ngwaahịa
Beelink GT-King juru eju n’ezie, ngwa ahụ niile dị n’otu igbe, n’adịghị ka, dịka ọmụmaatụ Beelink GT1 Mini na onye buuru Beelink GT1 Ultimate, na nkwakọ ngwaahịa nke ngwongwo niile juru na igbe dị iche. A na-ejikọ njikwa ikuku n'ime akpa rọba, eriri HDMI na eriri eriri, dị ka waya si enweta ọkụ.
Ihe ngwugwu gụnyere:
Ime akara (a na-eji eriri USB zoro n'ime ime)
Ntụziaka dị mkpirikpi (gụnyere Russian)
Tiketi kọntaktị Nkwado
Iche iche banyere latti akara. Njikwa njikwa ahụ na-arụ ọrụ na batrị 2x AAA (agunyeghị ya), na-ejikọ na njikwa ahụ site na eriri USB na-enweghị eriri. Igodo niile dị na njikwa anya ma e wezụga bọtịnụ ike na-arụ ọrụ naanị mgbe ejikọ USB. Igwe nsi ike na-arụ ọrụ site na onye nata IR.
Nke mbụ 1 si 2 Ọzọ
Ime ebe a nwere gyroscope wuru na bọtịnụ maka nchọta olu. Igwe na - achọ ụda olu si na igbe ahụ nwere ike ibido enyemaka nke olu olu Google Google. Banyere nchọta olu na ngwa etinyere na njikwa, na-enweghị ntọala ndị ọzọ anyị anaghị ekwu. Mana mgbe itinyechara nkeji 10 ọzọ nke oge, enwere ike ịhazi ihe niile
Bọtịnụ niile dị na njikwa ebe dị anya na-arụ ọrụ nke ọma, enwere ike ịhazi bọtịnụ ike maka ụdịdị dị iche iche, nkwụsị, ọnọdụ ihi ụra, nrụpụta
Nke mbụ 1 si 7 Ọzọ
Beelink GT-King natara ụfọdụ ihe nrụpụta ihe, nke mbụ ọ buru ibu, ma eleghị anya ihe kpatara mmụba nke nha anya ọnụnọ nke isi nrụpụta, yana enweghị nju oyi. Nke abuo, ihe osise ejiri okpo ocha kpuchie ya na onodu ahu, na onodu n’uche, anya na-acha dika ahihia, ihe di n’iru bu ihe eji achọ mma.
N’akụkụ ihu bụ oghere nke igwe okwu e wuru n’ime maka nchọta olu. N'akụkụ aka ekpe bụ 2 nke ọdụ ụgbọ USB 3.0 na oghere kaadị ebe nchekwa. N'akụkụ ụzọ bụ njikọta ike, ọdụ ụgbọ mmiri HDMI 2.1, ọdụ ụgbọ mmiri 2.0 USB, ọdụ ụgbọ mmiri SPDIF, ọdụ ụgbọ mmiri AV.
Onweghi onye na-ejikọ ya n’aka nri
Na ala Beelink GT-King, enwere akara (nọmba akara) na oghere maka ịgbalite ọnọdụ mmelite.
Ẹkedori na interface
Mgbe ị gbanyere Beelink GT-King na nke mbụ, dịka na ndị isi okwu mbụ, ọkachamara ntọlite ​​na-amalite, họrọ asụsụ, mpaghara oge, wdg.
N'agbanyeghị ụdị Android 9 emelitere, ihe njikwa ahụ agbanwebeghị, onye na-ebuputa ya na ihuenyo ụlọ na-ele otu ihe ahụ.
Nke mbụ 1 si 11 Ọzọ
Ntọala mbu ụzọ Beelink GT-Eze
Ntọala ndị a dị n'ụdị firmware arụnyere na njikwa anyị:
Display - ntọala ihuenyo
Mkpu ihu - ntọala mkpebi ihuenyo
Ntughari onwe ya na mkpebi kachasị mma - gbanwee na akpaghị aka kachasi mma ihuenyo
Ọnọdụ Ngosipụta (site na 480p 60 hz ruo 4k 2k 60hz) - nhọrọ ntuziaka nke mkpebi ihuenyo
Ntọala Omimi agba - ntọala ntọala agba
Ntọala oghere Agba - ntọala ntọala agba
Ọnọdụ ihuenyo - ntọala mbugharị ihuenyo
HDR ka SDR - ntụgharị akpaka nke ihe osise HDR gaa SDR (tụrụ aro mgbe ị na-ejikọ na TV na-enweghị nkwado HDR)
SDR ka HDR - ntụgharị akpaka nke ihe osise SDR na HDR (akwadoro mgbe ị na-ejikọ na TV na nkwado HDR)
HDMI CEC - ntọala maka ijikwa igbe set-top site na njikwa sistemụ TV (nke dị anya site na TV niile na-akwado ya, ihu ọma enwere nkwado na TV nke afọ ndị na-adịbeghị anya yana ọrụ SMART, mana TV ndị ahụ na-akwado ụkpụrụ a ọ na-arụ ọrụ dị mma).
Audio mmepụta - nhọrọ mmepụta ụda, ịnwere ike ịhọrọ n’etiti mputa site na HDMI na SPDIF
Powerkey definition - mwube ihe omume na bọtịnụ on / ngbanyụ na njikwa dịpụrụ adịpụ, ị nwere ike ịtọ omume ndị a: nkwụsị, banye n'ụra ụra, ịmaliteghachi.
Ọzọ ntọala - emepe ndepụta ntọala ngwaọrụ zuru ezu
Nchọpụta olu na Beelink GT-King
Njikwa ahụ nwere olu olu, mana ọ dị mwute na ọchụchọ ahụ anaghị arụ ọrụ n'ime ngwa ndị etinyere na Beelink GT-King. Mgbe ị pịrị igwe okwu dị na ebe njikwa anya, Google Voice Assistant na-ewepụta. Iji hazie ọchụchọ ahụ n'ime ngwa awụnyere, ị ga-anọrịrị oge wee gbanwee ntọala nke ihe njikwa gị.
Na ọdịnala, anyị na-amalite site na akara aka na Antutu, prefix Beelink GT-King nwetara ihe karịrị 105 isi
Nwalee Geekbench 4 ọzọ
O kwesiri iburu n’uche na obughi otu ihe gam akporo TV Box nwere ihe ngosi ndi ahu, nke a bu flagship ohuru nke android consoles.
Na ọnọdụ nrụgide, a na-edebe ọ̀tụ̀tụ̀ ikpo ọkụ ahụ na ọkwa nke 73, trotting n'oge nnukwu ibu bụ 13%
Anyị chọrọ ịmara na ọ bụrụ n’itinye sistemu eji eme ka ihe dị mma n ’igwe njikwa n’ ụdị nkwụnye ya na onye ofufe ma ọ bụ nnukwu igwe mkpuchi 120 mm, ebe efechapụrụ kpamkpam, na ọnọdụ okpomọkụ na-adịgide na ọkwa nke 69-71
Ọ dịkwa uru ịmara na mgbe ị na-eji njikwa maka nzube ebumnuche ya, na-ele vidiyo, enweghị okwu ọ bụla gbasara trotting ọ bụla, n'ihi na Ibu CPU erughi ọkwa dị oke mkpa maka cores niile n'otu oge. Banyere egwuregwu ahụ, mgbe ahụ trotting dị ugbu a, ọ bụ ezie na abụghị ozugbo, mana na egwuregwu ahụ, a naghị ahụ ya anya, n'ihi na ihe eji eme ihe n'onwe ya nwere ike zuru ezu, yana iwetulata obere ọrụ nke cores anaghị emetụta arụmọrụ nke njikwa.
Banyere njikọ wired, enweghị nsogbu ọ bụla, ọsọ a kwupụtara na 1 Gbit bụ eziokwu.
Mana njikọ Wi-Fi nwere ikike ụfọdụ, na 2,4 Ghz ọsọ na-agbanwe gburugburu 70-100 Mbit, na 5 GHz, a na-edebe ọsọ ọsọ na 300 Mbit.
N'ezie njirimara nke ngwaọrụ a bụ egwu egwu vidiyo site na isi mmalite ọ bụla. Mgbe a na-enyocha vidiyo ahụ, ejiri Kidi na MX Player. Dị ka ebe nchekwa vidiyo ahụ jiri NAS Synology DS718 +. Ihe vidiyo a nwere ọtụtụ obere vidiyo vidiyo nke ịdị mma dị iche (4k, 1080p) na nha dịgasị iche site na 10Gb ruo 100Gb.
Sisegharịrị vidiyo mpaghara, na-ekele maka nhazi amlogic S922X kachasị elu, na-arụ ọrụ zuru oke, enweghị nbudata ọ bụla, enweghị nwayọ, usoro vidiyo niile na-egwu nke ọma, na-alaghachi ozugbo.
Mgbe ị jiri eriri latrik jikọọ na-ekiri vidiyo, yana ịkpọgharịa n'ime obodo, enweghị nsogbu ekpughere.
Mana mgbe ị na-enyocha vidiyo a na Wi-Fi, enwere nkwupụta. Mgbe ejikọrọ na ugboro 2.4 GHz, ọ bụ naanị faịlụ ruru 30 Gb n'ogo ka ana-egwukarị, na ịlaghachi azụ nwere nnukwu oge ọ na-egbu oge. Mgbe a na-anwale ya na 5.8 Ghz ugboro, ọ nweghị nsogbu nkwụgharị vidiyo hụrụ, ọ bụ ezie na mgbe ị na-atụgharị oge na-egbu oge ka ogologo na njikọ njikọ.
N'agbanyeghị nke ahụ, maka nkasi obi zuru oke, jiri njikọ wired dị ka nke kachasị ọsọ.
Isi okwu dị mkpa, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na onye nrụpụta dere na nnọkọ ahụ na igbe a set-top enweghị nkwado maka DolbyTrueHD, DTS, Dolby Atmos codecs, anyị ka mere nnwale ezi ụda na codecs ndị a. Emere nnwale ahụ na nnata nke NAD M17, igbe ejikọtara ọnụ site na ma HDMI na SPDIF. O di nwute, n’ezie enweghi nkwado, mana etinyere codecs ndị a na ngwaọrụ onwe ya, ọ ga - ekwe omume na ọnọdụ ahụ ga - akawanye na firmware ọzọ, anyị ga - ejupụta ma chere. Ọ bụrụ n’anyị nwere ozi n’okwu a, anyị ga-agbakwunye nyocha a, yana ịkọpụta nsonaazụ ule.
A ga-akpọ nke a prefix a egwuregwu, na console m na-arụ ọrụ nke ọma ọbụna egwuregwu dị "ike". E hiwere egwuregwu ndị na-esonụ
Dị ka a tụrụ anya, enweghị nsogbu ọ bụla chọpụtara na egwuregwu ahụ, ihe niile na-aga nke ọma n’enweghi iwe, dịka achọpụtaghị trotting n'oge egwuregwu ahụ, ọ ga - ekwe omume iji ogologo oge nke njikwa egwuregwu ahụ trotting ga - ahụkarị, mana mgbe ị na - anwale njikwa maka awa 1 dị iche iche N’egwuregwu, prefix ahụ ka etinyere ọkụ naanị ogo digiri 65.
Nke a bụ console mbụ batara n'ahịa ahụ na onye nrụpụta Amlogic S922X ọhụrụ dị elu na n'ezie ọ nwere ntụpọ. N'ezie, Beelink ga-ahapụ mmelite femụwe n'ọdịnihu dị nso nke ga-agbasawanye ọrụ ya ma dozie njehie, mana maka ugbu a, anyị nwere ike ichikota flagship ọhụrụ
Ngwa ngwa ngwa kachasị ngwa iji gboo
Nkwado maka vidiyo vidiyo niile na code code dị
Ikike iji console dị ka ihe njikwa egwuregwu
Ikike iji hazie ihe ngwanrọ nke onwe gi site na igbanwe onye na-ebuputa ya ma wụnye mmemme ndi ozo site na Google Play
Ọnụnọ 2x USB ọdụ ụgbọ mmiri 3.0
Nkwado ikuku 5 Ghz site na ikuku
Ọnụahịa Nkwupụta nke onye nchịkọta akụkọ anyị gara maka ọnụahịa nke $ 119, ọnụahịa nke ugbu a nke njikwa n'oge edere nyocha $ 109.99, ikekwe mgbe obere oge ga-agbadata ọzọ. Mana n'echiche anyị, ụdị ọnụahịa dị otú ahụ buru oke ibu, ọnụahịa maka prefix dị otú ahụ kwesịrị ịdị gburugburu $ 100.
Okpomọkụ na trotting. Agbanyeghị na a hụrụ ikpo oku na trotting naanị na ule nrụgide, ha niile bụ otu, ma ọ bụrụ na ebido ngwa nke na-ebunye ihe nrụpụta niile na njikwa, mgbe ahụ enwere ike ịmegharị trotting ọzọ.
Njikọ Wi-Fi dị nwayọ. N'iburu n'uche eziokwu na ndị na-emepụta router na-ekwuputa ọnụego mbufe data na netwok ikuku na nkezi na 500 Mbit / s ruo 1,2 Gbit / s, enwere ike ịtụle nsonaazụ ndị a nwetara n'oge ule nke igbe set-top, na-eburu n'uche n'eziokwu na nke a anaghị egbochi ikiri vidiyo vidiyo. na egwuregwu.
Enweghị nkwado maka DolbyTrueHD, DTS, Dolby Atmos (enwere olileanya na a ga-edozi nke a n'oge na-adịghị anya)
Na mkpokọta, anyị nwere mmasị na nganiihu ahụ, ugbu a ọ bụ flagship ọhụụ, mana ogologo oge ọ ga-ekwu. Anyị nwere ike ịkwado prefix a, ma e wezụga ya, ọ nweghị ndị asọmpi.
Na ngalaba a anyị ga-ebipụta ihe ndị ọzọ na nsonaazụ nyocha ọzọ nke Beelink GT-King
Mgbe izu otu ọrụ nke igbe set-top, arụ ọrụ arụnyere arụmọrụ site na eriri HDMI, akpọrọ HDMI CEC, kwụsịrị ịrụ ọrụ, ekpughere ihe kpatara oge ikpe ahụ. Ọ tụgharịrị na eriri HDMI akpọchiri enweghị HDMI CEC nkwado ọlị, na eziokwu ahụ bụ na eburula ihe njikwa ahụ na teknụzụ a bụ ọrụ ebube. Ka teknụzụ a rụọ ọrụ, ị ga-azụta eriri HDMI dị iche adịghị ala karịa ụdị 1,4, ọ bụ ezie na anyị na-akwado ụdị 2.0
N'ikpeazụ, 17.06.19 mere mmelite mbụ ahụ maka Beelink GT-King, 20190614-1907. Na mmelite a, onye nrụpụta ahụ wepụtara sistemu ahụ ma tụọ ụfọdụ ahụhụ. Anyị na-anwale ugbu a, anyị ga-akọ akụkọ nsonaazụ iche iche.
Na gbapụta wheel na agba ụgbọ ala: ATL gwara otu esi ahọrọ compressor
Elekere smart kacha mma nke 2022 dị ka w4bsitXNUMX-dns.com si kwuo
Elekere mgbatị ahụ Mobvoi TicWatch GTW eSIM
Ọ bụ ihe ezi uche dị na ịzụta Xiaomi Mi Band 7
Okwu 5G maka HUAWEI P50 Pro
Ememe ncheta DAC Aune X8 XVIII
Garmin Forerunner 255 na Forerunner 955 - na-arụ ọrụ na ahụhụ
HUAWEI PixLab X1 bụ MFP mbụ nke ika a
Akwụkwọ Huawei MatePad: 3 n'ime otu akwụkwọ, akwụkwọ ndekọ na mbadamba
Nkọwapụta Laptọọpụ Gigabyte Aorus 17X YE
Lenovo Yoga 7000 bụ ihe ngosi 8K
Mkpokọta Social Media